အသက် ၃၀ - PIED“ ကျွန်ုပ်၏စေ့စပ်ထားသူဖြင့်ရက် ၉၀ ပြန်လည်စတင်ပြီးနောက်အောင်မြင်မှု!” - Porn တွင်သင်၏ ဦး နှောက်
အသက် ၃၀ - PIED“ ကျွန်တော့်စေ့စပ်သူနဲ့ရက် ၉၀ ပြန်လည်စတင်ပြီးနောက်အောင်မြင်မှု!”
ငါမင်းရဲ့ C ရဲ့ reboot ဇာတ်လမ်းကိုမင်းနဲ့အတူမျှဝေရမယ်။ C သည်အသက် ၃၀ ရှိပြီးလွန်ခဲ့သော ၃ လခန့်ကကျွန်ုပ်ထံစာရေးခဲ့သည်။ သူကလွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကသူ၏ PIED နှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုကြောင့်မိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်မထိန်းနိုင်အောင်မည်သို့ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းပြောပြခဲ့သည်။ နှင့်သူ၏စေ့စပ်ထားသူနှင့်အတူသူ၏စိုက်ထူစာသားမရှိခဲ့ဘူးခဲ့ကြသည်။
ဒါပေမယ့်။ ငါသူဖြစ်သောကြောင့်သူသည်မိမိအီးမေးလ်ကို အသုံးပြု. ခဲ့ဘာသာစကား၏ကသူ့ reboot အတွက်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်သိတယ်။
ဒါဟာသူသည်မိမိအခွအေနကေိုအဘို့အ 100% တာဝန်ယူဖူး, သူသည်အပြောင်းအလဲလုပ်ဖို့နေ့တိုင်းအလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ သူကသူ့အစပျိုးခြင်းသိတယ်, သူတို့ရှောင်ရှားရန်အောက်ခြေအထိထံမှသူ၏အသက်တာဒီဇိုင်းခဲ့သည်။
Flash ကိုရှေ့ဆက်မယ့်လအနည်းငယ်, ဒီမှာငါကို C ထဲကနေတယ်လတ်တလောမေးလ်ဖွင့်:
“ (မနေ့ည) ငါစေ့စပ်ထားသူကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။ အဆိုပါလိင်ကောင်းသောနှင့်ပျော်စရာဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စလုံးကျေနပ်ရောင့်ရဲခဲ့ကြသည်။ ငါ့ဘက်ခြမ်းမှာတော့ဒီ reboot ဟာအချိန်တန်ပြီဆိုတာငါဝမ်းသာတယ်။ လိင်ကိစ္စပိုခိုင်မာလာတယ်ဆိုတာကိုလည်းငါသဘောပေါက်လာတယ်၊ သူမနဲ့ကောင်းတဲ့ဆက်သွယ်ရေးကနေတဆင့်ငါအောင်မြင်စွာအောင်မြင်နိုင်ခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်၏စိုက်ထူခြင်းအရည်အသွေးသည်ကောင်းမွန်ပြီးစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်စိတ်များပျောက်ကွယ်သွားသည်။ ငါညဥ့်အခါကွဲပြားခြားနားသောအချိန်များတွင်သော်လည်းလေးကြိမ်လိင်ဆက်ဆံနိုင်ခဲ့သည် သူမ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်အာရုံစူးစိုက်ခြင်းဖြင့်၎င်းကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးပိုမိုလွယ်ကူလာခဲ့သည်။ ”
“ ငါအများကြီးသင်ယူရ ဦး မှာပါ၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါတို့နှစ်ယောက်စလုံးဟာဒီအရာအတွက်အသစ်ဖြစ်နေဆဲပဲ။ အရင်ကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်စိတ်ခံစားမှုအရဆက်သွယ်တာထက်လိင်ကိုပိုပြီးအာရုံစိုက်လေ့ရှိတယ်။ ဒါငါသဘောပေါက်သောအရာကို သူမသည်သူမကိုစိတ်လှုပ်ရှားမှုပိုင်းဆိုင်ရာမည်သို့ဖွင့်ရမည်ကိုလေ့လာရန်တာဝန်ရှိသည်။ ငါသူမနှင့်ငါ့စမ်းသပ်မှုတွေဝေမျှနိုင်ခဲ့သည်။ ပထမဆုံးလိင်ဆက်ဆံတာကိုကျွန်တော်ခံစားနိုင်ခဲ့တယ်။
ဝိုး။ ကိုယ့်လအနည်းငယ်မှီ, ကို C ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သည်သူ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိုးရိမ်စိတ်များမှာအားလုံးမိန်းကလေးတစ်ဦးနှင့်အတူတစ်စိုက်ထူမရနိုင်ခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းခြင်းဖြင့် desensitized ခံရ။ ယခုသူတဦးတည်းညဉ့်အခါလိင်လေးကြိမ်ရှိခြင်းရဲ့!
သူသည်မိမိအ reboot လုပ်ပါကပ်နှင့်သူ၏အသက်တာကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်ရွေးချယ်မှုလုပ်အားလုံးလို့ပဲ။ ရုံဇွဲ, တစ်လှုံ့ဆျောမှုရည်မှန်းချက်များနှင့်တစ်ဦးအလွန်ကြီးစွာသောမဟာဗျူဟာရှိခြင်းသည်သင်၏အသက်တာ၌ကြီးမားသောအပြုသဘောအပြောင်းအလဲများကိုဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်ကိုသင်ပြတတ်၏။
ဒီအောင်မြင်မှုဇာတ်လမ်းတွေကိုမျှဝေရတာကိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကသင်အမှန်တကယ်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြissuesနာများနဲ့အတူတူပဲ - အစစ်အမှန်လူတွေဟာသူတို့ကိုကျော်လွှားနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုပြတာပါ။
မရနေ့ချင်းညချင်းမဟုတ်, အချို့သောဆေးလုံးသို့မဟုတ် 'မှော်ကျည်ဆံ' 'ရောဂါပျောက်ကင်းယူခြင်းအားဖြင့်။ သို့သော်တသမတ်တည်းမိမိတို့၏ရည်မှန်းချက်များ၏ညှနျကွားထဲမှာအရေးယူသည်။
51 နှစ်ဟောငျးငါ NoFap ရှာဖွေတွေ့ရှိသည့်အခါ
“ မင်းကလူပဲ၊ စွဲလမ်းသူမဟုတ်ဘူး